Chimpanzi, Shiri, Kudzivirirwa Kwemhuka Dzinongogumira kuUganda Bugoma Sango
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Uganda Breaking News » Chimpanzi, Shiri, Kudzivirirwa Kwemhuka Dzinongogumira kuUganda Bugoma Sango
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hurumende Nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Uganda Breaking News
KuUganda, Chimpanzee Sanctuary uye Wildlife Conservation Trust, National Association of Professional Environmentalists (NAPE), ECOTRUST, Uganda Tourism Association, Association of Uganda Tour Operators (AUTO) Association for the Conservation of Bugoma Forest uye Tree Talk Plus vari kurwira Bugoma Sango kuponeswa.
Vashandi vatanhatu veAfrica Institute for Energy Governance (AFIEGO) vanosanganisira CEO Dickens Kamugisha vakasungwa nekuvharirwa kuUganda paKiira Police Station, Kampala musi wa22 Gumiguru 2021 vachishanda vasina rezinesi.
Izvi zvakasimbiswa mu tweet yakatumirwa papeji re Twitter re AFIEGO nguva pfupi vachangosungwa.
AFIEGO anga ari kuCentre ye #saveBugomaforest mushandirapamwe kumadokero kweUganda mushure me5,779 hectares mahekita emasango 41,144-mahekita akabhadharwa neBunyoro Kitara Kingdom kuHoima Sugar Limited kuti irime shuga.
Africa Institute for Energy Kutonga (AFIEGO) ikambani yeUganda iri kuita ruzhinji ruzivo nekutsvaga kukurudzira masimba emagetsi kubatsira varombo nevanotambura.
Kubva munaNyamavhuvhu 2020, apo magrader echimakanika akachavira kuhupenyu sechikamu chekupokana chirongwa chekugadzira nzimbe, vagari nemapoka emasangano ari pasi pechirongwa cheSave Bugoma Forest vange vachirwira kukwirwa zviri pamutemo.
Kusungwa uku kwakauya mushure memutongo neUganda High Court Civil Division Musa Sekana munaGunyana 2021.
Mushure memutongo wakanangana neHumambo hwekuhaya chikamu chesango mushure mekunge AFIEGO uye Water and Environment Network (WEMNET) yakamhan'ara kumatare kuNational Environment Management Agency (NEMA) yekubvumidza gwaro rezvakatipoteredza uye zvemagariro (ESIA).
Chirevo ichi chakapihwa manyepo neHoima Sugar Limited ichiti dura ravaida kushandisa mukugadzira shuga rakanga riri munzvimbo ine huswa yakashata uye isingakanganise miganho yesango. Iyo yainzi yaive padhuze nesango reBugoma kunyangwe satellite yaitaridza zvichipesana.
Sango reBugoma isango rakadzivirirwa rinotonhora iro riri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweHoima uye kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kwemataundi eKyenjojo, uye kumabvazuva kweLake Albert, mudunhu reHoima kumadokero kweUganda. Yakaburitswa muma1930 uye ikauya pasi pesimba reNational Forestry Authority muna 2003
Pa 1 Nyamavhuvhu 2016, Uganda Land Commission yakapa Land Land ye5,779 hectares (22 Square Miles) kuHumambo hweBunyoro Kitarawhich
Ivhu rakabhadharwa ipapo kuHoima Sugar. Muna Chivabvu 2019, Mutongi wedare repamusoro reMasindi, Wilson Masalu akavimba neuchapupu hwaCommissioner Lands and Mappings, Wilson Ogalo mukutongwa kwakaitwa National Forestry Authority (NFA) kuti
Mutongi akapa mutongo zvichibva pauchapupu, mahekita 5,779 eBugoma Forest Reserve aifanirwa kutariswa ari kunze kwedondo.
Naizvozvo zvakatongwa kuti nyika iri kupokana yaive yaOmukama (Mambo weBunyoro). Mutongo uyu wakazarura ruoko rwemahara kuumambo kuti vape nyika kuHoima Sugar.
Chirongwa cheMakomishina Ogalos chine hunhu zvichitevera kuramba kwake panguva yekuferefetwa kwakafanana pamusoro pekuparadzwa kweKisankobe Sango mudunhu reMukono muna Gumiguru 2020.
Tungamirwa naKamgusha, iyo #SaveBugomaForest mushandirapamwe wakazosvika kuRt. Anokudzwa Mutauriri weParamende yeUganda Jacob L'Okori Oulanyah Chambers neChina 9 Gunyana 2021.
Nharaunda dzinogara padhuze nesango reBugoma dzakadaidzira kuchengetedza sango Vanodawo Paramende kuti ikurukure danho pamusoro pekuchengetedza sango. Kufambisa uku kwave kuri pabepa rekuodha kubva munaGunyana 28, 2021.
Chikumbiro chakaendeswa nechinangwa chekumisa kuparadzwa kweBugoma Central Forest Reserve.
Chikumbiro chakasainwa nevanhu vanopfuura makumi maviri ezviuru vanogara mumisha makumi matatu + mumatunhu eKikuube neHoima.
Matunhu aya ndiwo musha wesango rinotyisidzirwa. Mhando musango dzinosanganisira Uganda Mangabey, Chimpanzees, uye hupenyu hweshiri.
Chikumbiro chakakumbira kumisa nekukurumidza kuparadza kuri kuitika kwesango reBugoma uye kuponesa raramo yenzvimbo dzenzvimbo iyi uye kuchengetedza nhaka yeUganda.
Mutauriri akapa nyaya iyi kukomiti yeparamende inoona nezvezvakatipoteredza.
Chikumbiro ichi chakatsigirwawo nemamwe masangano ehurumende anosanganisira Africa Institute for Energy Governance (AFIEGO), Mvura nenzvimbo, Media Network (WEMNET), Chimpanzee Sanctuary uye Wildlife Conservation Trust, National Association of Professional Environmentalists (NAPE), ECOTRUST, Uganda Tourism Sangano, Association yeUganda Yevashanyi Vanoshanda (AUTO) Sangano reKuchengetwa kweBugoma Sango neMuti Talk Plus.
Pakati paAugust naSeptember, nzou yemusango uye chimpanzi zviviri zvakawanikwa zvakafa munzvimbo dzesango nekuda kweiyi mhirizhonga yemhuka-yemhuka sezvo mhuka dzichipererwa nemvura apo sango raivamanikidza kutsvaga chikafu mumapindu kunharaunda dziri pedyo.
Kubva pakatanga kutemwa kwesango, shungu nemombe dzinotambudzika dzemhuka dzesango dzakarwisa vagari vemumatunhu akapoterera zvirimwa zvavo.
AFIEGO yave zvakare iri pasi pekumanikidzwa kukuru nekuda kwekudzivirira kodzero dzemunharaunda dzakakanganiswa nemafuta mudunhu reHoima. Zvinoshamisa kuti ivo zvakare vanodzivirirwa neiyo Bunyoro Kitara Kingdom.
MunaGunyana 2020, Venex Watebawa naJoshua Mutale, vatori venhau veWEMNET vakasungwa muHoima munzira yavo yekuenda kunhepfenyuro yenhepfenyuro kuSpice FM.
Mapurisa eUganda akaedza kuvhara mushandirapamwe we # savebugomaforest.
Kuchenesa kweAFIEGO ndiko kwazvino kwekusungwa kubvira muna Nyamavhuvhu 2020, Masangano Asiri Ehurumende akati wandei aiita basa rekodzero dzevanhu, vanhu vakavhiringidzwa nechirongwa chekugadzira oiri isina kugadzirwa uye nharaunda zviitiko zvavo zvakamiswa mushure mekuzunza hurumende muhurumende. nzira isiriyo.
Commissioner weResident District Kikube Amian Tumusiime ari muchibvumirano sezvo akamhan'arira mamwe masangano ehurumende pamwe nehumambo hweBunyoro Kitara nehuwori nekutadza kuvhura miganhu yeBugoma Forest kana vachipindura kunetseka kuri munharaunda nhaurirano dzekuchengetedza dzakarongwa neAnti-Corruption Coalition .